In 1992, before I wasafull-time artist, I readabook about Gauguin. It inspired me to writeasong entitled ‘Melancholic Yearning for Paul Gauguin’. I held an exhibition with that song and some paintings. In this painting, there are words that show the troubles endured by artists. I copied and printed Gauguin’s original painting. By copy, I don’t mean plagiarize. I directly copied and added my own creation. I also added Gauguin’s image. Gauguin wasarich man. After he contracted the art virus, though, he starved to death on an island. I was scared when I first read that. I wasn’t an artist back then, I was only doing it for fun. So I wrote this song and gave the exhibition the same name. The words on the painting are taken from the book. Gauguin’s wife said to him: ‘You’re so poor, but you can’t let go of your vanity.’ I respect all artists. They fight for what they believe and what they love.
In the time of U Ngwe Gaing and U Ba Nyan, artists had to paint for monks’ funerals. Then they painted car license plates. It was bad. As they wanted to paint, they just did whatever they could to makealiving. Then there were illustrators working on books. But nowadays you can sell your artwork. In art, you can paint whatever you like and present your feelings freely. It’s fine art. I did my first solo exhibition in 2010. Then you could sell your artwork to some extent and galleries started to open. Our country is still improving when compared with developed countries. But we could haveabreakthrough in the global art scene. We’re not an inferior people.
၁၉၉၂ တုန်းက ပန်းချီလောကထဲတောင် ထဲထဲဝင်ဝင်မရောက်သေးချိန်က ဂေါ်ဂင်အကြောင်း စာအုပ်ဖတ်ပြီးတော့ ရေးထားတဲ့ ပေါလ်ဂေါ်ဂင်သို့ ကြေကွဲခြင်းဆိုတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ရှိတယ်။ အဲ့ဒီသီချင်းလေးနဲ့ ပန်းချီကားတွေနဲ့ တွဲပြီးတော့ ကျနော် ပြပွဲလုပ်တာ။ အဲ့ဒီပန်းချီကားမှာဆိုရင် အပေါ်မှာ ပန်းချီဆရာတွေရဲ့ ဒုက္ခတွေကို မြင်သာထင်ရှားတဲ့ စာတွေ ပါတယ်။ ဂေါ်ဂင်ရဲ့ မူရင်းကားတွေကို ကျနော်က ကော်ပီလုပ်ပြီး ပုရင့် ပြန်ထုတ်တာ။ ကော်ပီလုပ်တယ်ဆိုတာ ခိုးချတာမဟုတ်ဘူးနော်။ ကျနော်က ဒဲ့လုပ်ပြီး ကျနော်ရေးချင်တာတွေရေးတယ်။ ဂေါ်ဂင်ပုံတွေလည်း ထည့်ထားတယ်ပေါ့။ ဂေါ်ဂင်က သူဌေးဗျာ။ ချမ်းသာတယ်။ နောက်ဆုံး ပန်းချီပိုးဝင်သွားတာပေါ့ဗျာ။ အငတ်ငတ်အပြတ်ပြတ်နဲ့ နောက်ဆုံး ကျွန်းမှာ သေသွားတယ်လေ။ အဲ့ဒါကို ကျနော်က ဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ကြောက်သွားတယ်။ အဲ့ဒီတုန်းက ပန်းချီဆရာမဖြစ်သေးဘူး၊ ဝါသနာအရသာရေးနေတာ။ အဲ့သီချင်းလေးကို ရေးဖြစ်တယ်။ အဲ့သီချင်းနဲ့စပ်ဆက်ပြီးတော့မှ ဒီပြပွဲက ဖြစ်သွားတာ။ ပန်းချီပေါ်မှာရေးထားတဲ့ ရှင်ဟာ ဒီလောက် ဆင်းရဲတာတောင် မာနကြီးတုန်းပဲနော်ဆိုတဲ့ စကားက စာအုပ်ထဲမှာ ဂေါ်ဂင်ရဲ့မိန်းမက ဂေါ်ဂင်ကို ပြောတဲ့စကား။ ကျနော်က အနုပညာသမားတိုင်းကို လေးစားတယ်လေ။ အနုပညာသမားတွေက သူတို့ယုံကြည်တာ ဝါသနာပါတာလုပ်ကြတာကိုးဗျ။
ကျနော်တို့ ပန်းချီလောကမှာ ဟိုတုန်းက ပန်းချီဆရာတွေဖြစ်တဲ့ ဦးငွေခိုင်တို့ ဦးဘဥာဏ်တို့လက်ထက်ကဆိုရင် ပန်းချီဆရာတွေက ဘုန်းကြီးပျံတွေမှာ လိုက်ပြီးတော့ ရေးရတယ်ဗျာ။ ကားတွေပေါ်လာတော့ ကားနံပါတ်တွေ ရေးရတယ်ဗျာ။ ဆိုးပါတယ်။ ဝါသနာပါတော့ ဒါလေး လုပ်တတ်တော့ ဒါနဲ့ပဲ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုရတော့ အကုန်လိုက်လုပ်ရတယ်။ အဲ့ဒီကြားထဲမှာ ဘာရှိလဲဆိုတော့ သရုပ်ဖော် ပန်းချီဆရာတွေရှိတယ်။ အဲ့ဒီကာလကဆိုရင် စာရေးဆရာရဲ့ စာအုပ်ကို သရုပ်ဖော်ရတာ။ ဒါပေမယ့် ဒီဘက်ခေတ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ ပန်းချီကားကို ရောင်းစားလို့ရတယ်လေ။ ပန်းချီကားကျတော့ ရေးချင်တာ ရေးလို့ရတယ်။ ကိုယ့်ခံစားမှုကို လွတ်လွတ်လပ်လပ်တင်ဆက်လို့ရတဲ့ fine art ပေါ့။ ၂၀၁၀ တုန်းကကျတော့ ပထမ ဆိုလို ကို ၂၀၁၀ မှာလုပ်ခဲ့တယ်။ ပန်းချီကားကတော့ ထိုက်သင့်သလောက် ရောင်းစားလို့ရပြီ ပြခန်းတွေပေါ်လာပြီ။ တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့စာရင် ကျနော်တို့ နိုင်ငံတွေက ဖွံ့ဖြိုးဆဲပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ အနုပညာ ပန်းချီနဲ့ပတ်သက်လို့ ကမ္ဘာကို ဖောက်နိုင်တယ်။ သိပ်နှိမ့်ကျတဲ့သူတွေတော့ မဟုတ်ဘူး။
၂၀၂၀ မတ် ၅